ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်တရုတ်နိုင်ငံ Micromotor စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအစီရင်ခံစာ, 2016-2020 - တရုတ်ရှန်ဒေါင်း သာ. ကောင်း၏မော်တော်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်တရုတ်နိုင်ငံ Micromotor စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအစီရင်ခံစာ, 2016-2020
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ micromotor output ကို, 2015 ခုနှစ်တွင် 17.5 ဘီလီယံအထိယူနစ်မှာ 4.8% ၏တစ်နှစ်-on-တစ်နှစ်တိုးရပ်နေ၏။ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုခေတ်မီဖို့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးမှကျေးဇူးတင်ပါသည်, အ output ကို 2016 ခုနှစ်တွင် 18.4 ဘီလီယံအထိယူနစ်မှထမြောက်ရန်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့် 2020 ခုနှစ်တွင် 23 ဘီလီယံယူနစ်ချဉ်းကပ်နေပါတယ်။
တရုတ်, micromotors ၏ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်သူ, ထ 6.0% လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကထဲကနေ, 2015 ခုနှစ်တွင် 12.4 ဘီလီယံအထိယူနစ်ထုတ်လုပ်နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစုစုပေါင်း 70,9% များအတွက်စာရင်းကိုင်။ အဆိုပါနိုင်ငံ၏ micromotor output ကို 2016-2020 ကာလအတွင်းန်းကျင် 7.0% တစ် CAGR မှာ 2020 ခုနှစ်တွင် 17 ဘီလျံယူနစ်နီးစပ်သူဖြစ်ဟောကိန်းထုတ်နေပါတယ်။
တရုတ် includeJohnson လျှပ်စစ်, ကောင်းစွာဦးပိုင်လီမိတက်, တရုတ်အကြီးဆုံး micromotor ထုတ်လုပ်သူအဖြစ် Zhongshan Broad-သမုဒ္ဒရာ Motor Co. , Ltd နှင့် Wolong လျှပ်စစ် Group မှ Co. , Ltd ဂျွန်ဆင်လျှပ်စစ်အတွက် Keymicromotor ထုတ်လုပ်သူ, အတူ overUSD1 ဘီလီယံနှစ်စဉ်ဝင်ငွေရရှိ 2015 ခုနှစ်တွင် 4.3% တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်ဝေစု။
တရုတ်မှာတော့ micromotor ရိုးရာ application ကိုစျေးကွက်တဖြည်းဖြည်းပြည့်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ 2015 ခုနှစ်တွင် 52.4% တစ်ခုပေါင်းစပ်အချိုးအစားကျင်းပသည့်ထိုကဲ့သို့သောအသံထုတ်ကုန်, အိမ်သူအိမ်သားကရိယာများနှင့်မော်တော်ယာဉ်အဖြစ်အစဉ်အလာနယ်ပယ်ထဲမှာအဓိကအားဖြင့်၎င်း၏လျှောက်လွှာကိုတွေ့, micromotor တိုးတက်မှု၏အဓိကယာဉ်မောင်းထွန်းသစ်စပါလိမ့်မည် စွမ်းအင်သစ်မော်တော်ယာဉ်, ဝတ်ဆင်ကိရိယာစက်ရုပ်, မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များနှင့်စမတ်နေအိမ်နဲ့တူကဏ္ဍများ။
ပြန်ကြားရေးစက်မှု: Mobile Terminal များအတွက်ဗီဒီယိုဖန်တီးမှုဈေးကွက်၏တရုတ်နိုင်ငံတင်ပို့ရောင်းချမှုအကြီးအကျယ်စမတ်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာများအားဖြင့်မောင်းနှင်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစုစုပေါင်း 45,9%, ၎င်းပြင်ထ 12.9%, တစ်နှစ်အပေါ်နှစ်က 2015 ခုနှစ် 542kk ခဲ့ကြသည်။ စမတ်ဖုန်းနှင့် tablet PC ကိုများကဲ့သို့ရိုးရာစားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်များအတွက်စျေးကွက်တဖြည်းဖြည်းရွှဲနှင့်အတူ, ဝတ်ဆင် devices များထပ်မံ micromotor ဝယ်လိုအားတိုးမြှင်အသစ်တစ်ခုတိုးတက်မှုနှုန်းဧရိယာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ တရုတ်ဝတ်ဆင် device ကိုစျေးကွက်က 25% ကျော်နှစ်စဉ်တိုးတက်နှုန်းမှာချဲ့ထွင်ရန်ခန့်မှန်းထားသည်။
မော်တော်ကား: 2015 ခုနှစ်, မော်တော်ကား micromotor အဘို့တရုတ်နိုင်ငံ၏ဝယ်လိုအားထက်နည်း 3% စွမ်းအင်သစ်မော်တော်ယာဉ်ကနေလာမယ့်, (2020 ခုနှစ် 1,62 ဘီလီယံခန့်ယူနစ်မှထမြောက်ဖို့မျှော်လင့်ထားသည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစုစုပေါင်း 24.9%) 1.02 ဘီလီယံခန့်ယူနစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ နယူးစွမ်းအင်မော်တော်ယာဉ်အရောင်းတရုတ်နိုင်ငံတွင် 2011-2015 ကာလအတွင်း 152,1% တစ်ဦးဝင်းနှစ်ပတ်လည်မှုနှုန်းမှာကြီးပြင်းခြင်းနှင့်, အမျိုးသားရေးနှင့်ဒေသခံမူဝါဒများများ၏ထောက်ခံမှုနှင့်အတူနှစ်ပေါင်း၏နောက်စုံတွဲတစ်တွဲကိုကျော်ခိုင်ခံ့သောတိုးတက်မှုနှုန်းအရှိန်အဟုန်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာစွမ်းအင်သစ်မော်တော်ယာဉ်များအတွက် micromotors ၏စျေးကွက်ဝယ်လိုအား 2020 ခုနှစ်တွင်သန်း 150 ယူနစ်ထက် ကျော်လွန်. နှင့်အတူ 2016-2020 ကာလအတွင်းနှစ်စဉ် 40% ကျော်တက်မယ့်စောင့်ရှောက်လိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းထားပါသည်။
စက်ရုပ်: 248.000 စက်မှုဇုန်စက်ရုပ်နှင့် 6,41 သန်းဝန်ဆောင်မှုစက်ရုပ်အတူတကွအကြောင်းကို 66,6 သန်း micromotors (2020 ခုနှစ် 300 ကျော်သန်းယူနစ်တစ်ခုခန့်မှန်းချက်) ၏ဝယ်လိုအားအတွက်အသီးသီးတက် 8.3% နှင့် 35.7% တစ်နှစ်အစောပိုင်းကထဲကနေ, 2015 ခုနှစ်တွင်တစ်ကမ္ဘာလုံးရောင်းချခဲ့သည် ။ 2015 ခုနှစ်တွင်တရုတ်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုများအတွက်ကြီးမားတဲ့အာကာသညွှန်ပြကမ္ဘာ့စက်မှုစက်ရုပ်အရောင်း၏ 22.9% နှင့်ဝန်ဆောင်မှုစက်ရုပ်ရောင်းအားခန့်သာ 5.0% အဘို့မှတ်။
စားသုံးသူ-grade ကိုမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်: 2015 ခုနှစ်, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစားသုံးသူ-grade ကိုမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အရောင်းတရုတ်နိုင်ငံတွင်သာလျော့နည်း 20000 ထက်ယူနစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ် 200,000 ယူနစ်ထက်ကျော်လွန်။ အနိမ့်အမြင့်လေပိုင်နက်တဖြည်းဖြည်းဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သကဲ့သို့, တရုတ်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဈေးကွက် 50% ကျော်တဲ့နှုန်းလျင်မြန်စွာကြီးထွားနေတဲ့ကာလ၌ဆောငျကွဉျးပေးပါလိမ့်မယ်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, မူဝါဒများကထောက်ခံ 3D ပုံနှိပ်ခြင်း, စမတ်နေအိမ်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အလိုအလျောက်ဓာတ်ခွဲခန်းများအတွက်သစ်ကိုစျေးကွက်ကိုလည်းနောက်ထပ် micromotors များအတွက်ဝယ်လိုအားကားမောင်းမြင့်မားဂီယာသို့ကန်ပါလိမ့်မယ်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်တရုတ်နိုင်ငံ Micromotor စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအစီရင်ခံစာ, 2016-2020 အောက်ပါမီးမောင်းထိုးပြ:
ကမ္တာ့ micromotor စက်မှုလုပ်ငန်း (စသည်တို့ကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးသမိုင်း, စျေးကွက်အရွယ်အစား, စျေးကွက်ဖွဲ့စည်းပုံ, အပြိုင်အဆိုင်ရှုခင်း,);
တရုတ်နိုင်ငံတွင် Micromotor စက်မှုလုပ်ငန်း (စသည်တို့ကိုပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကိုစျေးကွက်အရွယ်အစား, စျေးကွက်ဖွဲ့စည်းပုံ, အပြိုင်အဆိုင်ရှုခင်း, သွင်းကုန် & တင်ပို့မှု);
စျေးကွက်အရွယ်အစား, စျေးကွက်ဖွဲ့စည်းပုံ, ဖွံ့ဖြိုးရေးခေတ်ရေစီးကြောင်း, စသည်တို့ပါဝင်သောအဓိကအထက်ပိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများ (ဆောင်သောသံလိုက်ပစ္စည်းများ,, etc), .;
လျှောက်လွှာနှင့်စျေးကွက်နှငျ့ပတျသကျသောမြစ်အောက်ပိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများ (သတင်းအချက်အလက်, မော်တော်ကား, အိမ်သူအိမ်သားပစ္စည်း, စက်ရုပ်, မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်, 3D ပုံနှိပ်ခြင်း, စမတ်နေအိမ်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ, etc),
11 ကို Global 10 တရုတ် micromotor ထုတ်လုပ်သူ (စစ်ဆင်ရေး, micromotor စီးပွားရေး, စတာတွေတရုတ်, ဖွံ့ဖြိုးရေး) ။
Post ကိုအချိန်: ဖေဖော်ဝါရီ-27-2018